Nosamborina ny mpanao gazety Kashmiri rehefa nitatitra momba an’i Burhan Wani, ilay mpikomy novonoina, · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2018 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, عربي, English
Ny tafika indiana nanangana sakana hanakanana ireo vato rehefa nipoaka ny hetsi-panoherana tao Srinagar, renivohitr'i Jammu sy Kashmir . Sarin'i Ieshan Wani tao amin'ny Instagram. Nahazoana alalana.
Notazomin'ny polisy ao amin'ny fanjakana Indiana ao Jammu sy Kashmir ny mpanao gazety iray izay voalaza fa ” nampiantrano mpampihorohoro.” Nosamborin'ny polisy mba hanaovana fanadihadiana tamin'ny 27 Aogositra i Aasif Sultan, izay miara-miasa amin'ny gazetiboky Kashmir Narrator ao Srinagar.
Araka ny filazan'ny fianakaviana, nanafika ny tranon'izy ireo tao Batamaloo, faritry ny tanàndehibe ny polisy tao an-toerana ary nitondra an'i Aasif . Nolazain'ny rainy tamin'ny fampitam-baovao tao an-toerana fa nalain'ny polisy ny entan-janany manokana, anisan'izany ny solosaina enti-tanana sy ny fitaovana elektronika hafa, nandritra ity bemidina ity.
Enina andro izay no nogadraina tsy ara-drariny i Asif Sultan ilay mpanao gazety monina ao Srinagar. Nalain'ny polisy ny findainy, ny solosainy enti-tanana ary ny fitaovana hafa ihany koa.
Eo ambany fanafihana ny asa fanaovan-gazety!
Nihevitra ireo namany fa lasibatra izy noho ny fitantarany iray vao haingana izay nanasongadina ny lehiben'ny mpikomy novonoina antsoina hoe Burhan Wani teo amin'ny fonon-gazety.
Vao haingana i Asif Sultan no nanoratra tantara iray momba an'i #Burhanwani, ilay lehiben'ny Hizb malaza novonoina tamin'ny taona 2016, famonoana izay nahatonga ny fitroarana faobe tany amin'ny lohasahan'i Kashmir, izay nanaovana fanadihadiana azy.
Nitaky ny famotsorana azy avy hatrany ireo mpanao gazety miasa ao Kashmir. Raha nanameloka ny fisamborana azy dia nilaza ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Miasa ao Kashmir sy ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Kashmir fa:
Tezitra izahay rehefa nandre fa ny mpanao gazety, Aasif Sultan, dia nogadraina tsy ara-dalàna tao amin'ny tobin'ny polisy Batamaloo nandritra ny enina andro izay. Mitaky ny famotsorana azy tsy misy hatak'andro izahay noho ny fanagadrana azy tsy ara-dalàna.
Nilaza tamin'ny gazety iray tao Delhi ny toniandahatsoratra ao amin'ny Kashmir Narrator, izay hiasan'i Aasif ho toy ny toniandahatsoratra mpanampy, fa tamim-pahadisoana no nandraisana ny fitantarany ary lasibatra ny gazetiboky noho ny tatitra nataon'izy ireo.
Ny sary tapak'ilay mpanao gazety voatazona. Nahazoana alalana.
“Resaka akoholahy sy ombilahy ity. Tsy faly tamin'ny tatitra nataonay [ny polisy], “hoy izy.
“Nentinay tany amin'ny CPJ, IFJ, ary fikambanana iraisam-pirenena hafa ny fisamborana azy. Hiady izahay ao amin'ny fitsarana izahay “, hoy ny toniandahatsoratra Showkat Motta tamin'ny Indian Express.
Nilaza tao amin'ny fanambarana an-gazety ny polisin'i Jammu sy Kashmir fa nogiazin-dry zareo izay lazainy fa “fitaovana manaporofo ny fahamelohana” avy amin'ny toerana samihafa.
Na dia tamin'ny 27 Aogositra aza i Aasif no nosamborina dia ny 31 Aogositra vao nisy ny Tatitra Fampahalalam-baovao Voalohany.
“Tamin'ny 31/08/2018 dia nosamborin'ny Tobin'ny Polisy Batamaloo noho ny raharaha laharana FIR No 73/2018 i Asif Sultan S/O Mohammad Sultan Saida R/O Firdousabad Batamaloo,” hoy ny fanambaran'ny polisy .
Nisioka i Harris Jargar, mpanao gazety iray ao amin'ny vavahadim-baovao Indian News LiveMint hoe:
Mahaliana ahy ny mahafantatra hoe inona ny “porofo manamarina ny fanamelohana” izay hitan'ny polisy tao Kashmir tany amin'ny mpanao gazety Aasif Sultan. Moa ve tsy efa nandre ny fitarainana toy izany isika teo aloha momba ireo mpanao gazety malaza kashmirita!!
Nisioka ilay Mpanao gazety ao amin'ny Republic TV Aditya Raj Kaul hoe:
Manafintohina. Nosamborin'ny Polisy J&K tao Srinagar, Kashmir ilay mpanao gazety Kashmirita Asif Sultan izay miara-miasa amin'ny ‘Kashmir Narrator’ noho izy ‘nampiantrano ireo mpampihorohoro fantatra fa voarohirohy tamin'ny heloka bevava fampihorohoroana mahery vaika’. Miala tsikelikely ny saron-tava ao amin'ny lohasaha Kashmir. Hitan'ny rehetra ny zava-misy.
Namoaka fanambarana iray maneho ny ahiahiny lalina momba ny fitazonana mitohy sy ny fanadihadiana an'i Aasif ny Komity Miaro ny Mpanao Gazety.
“Tokony hamoaka avy hatrany an'i Aasif Sultan any an-tranomaizina ny polisy ary hampitsahatra ny ezaka mba hanerena azy hilaza ny loharanom-baovao na ho lasa mpanome vaovao”, hoy i Steven Butler, mpandrindra ny fandaharanasa CPJ any Azia tao anaty fanambarana. “Nanao asa fanompoana ny vahoaka lehibe i Sultan fa tsy nanao heloka bevava tamin'ny fanaovana tatitra momba ny hetsiky ny mpikatroka.”